ရာအူးလ် Jimenez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ တောင်အမေရိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ရာအူးလ် Jimenez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် စက်တင်ဘာလ 16, 2019
LB အကောင်းဆုံးနာမတော်ဖြင့်လူသိများသည်သူတစ်ဦးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက် "RJ9"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရာအူးလ် Jimenez ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသည်သင်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သူ၏အစောပိုင်းဘဝ, မိသားစုနောက်ခံ, ကျော်ကြားမှုမတိုင်မီဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ, ကျော်ကြားမှုပုံပြင်, ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝမှထမြောက်ပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကိုသူတစ်ဦးတီထွင်ခဲ့တယ်တိုက်စစ်မှူးဖြစ်ပါတယ်သိတယ်။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောရာအူးလ် Jimenez ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
ရာအူးလ် Jimenez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
ချွတ်စတင်ခြင်း, မိမိအမည်အပြည့်အစုံ Raul Alonso Jimenez Rodriguez ။ ရာအူးလ် Jimenez မေလ5၏ 1991th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သူကသူ့မိခင်, မာသ Rodriguez နှင့် Tepeji, မက္ကဆီကိုအတွက်ဖခင် Raul Jimenez Vegas မှမွေးဖွားခဲ့သည်။
ဒါဟာသူတို့အတူတူဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအရေးမထားဘူး။ သင်တစ်ဦးသည်မင်္ဂလာစုံတွဲမြင်သောအခါ, သင်ရုံသိ !. မာသနှင့် Vegas နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးမက္ကဆီကန်မြို့ Requena အမည်ရှိ၎င်း၏လှပသောရေကန်များအတွက်လူသိများသည်, Tepeji အတွက်အလတ်စားလူတန်းစားမိသားစုအိမ်ထောင်စုတည်ဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ရာအူးလ် Jimenez သည်သူ၏မောင်နှမနှင့်အတူကြီးပြင်းလာ; နှမဟာရာအူးလ်အန်ဒရီအမည်ရှိကြီး၏နှင့်အဘယ်သူ၏နာမကိုအမှီနေဆဲရာအူးလ်သည် Jimenez မိသားစုမှမွေးဖွားနောက်ဆုံး, Miranda Jimenez နှင့်ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်အမည်ရှိ။ အားလုံးလေးတွေဥရောပနှင့်ဌာနေမက္ကဆီကန်တစ်ဦးအရောအနှောသော Mestizo မက္ကဆီကန်အမွေအနှစ်သို့မွေးဖွားခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးက Jovial နှင့်ဂရုစိုကျညီအစျကို:
ညာဘက်သူ့ရဲ့ကလေးဘဝလက်ထက် မှစ. , ရာအူးလ်ကအမှန်တကယ်အပြုံးထက်မျက်မှောင်ကြုတ်ဖို့ပိုပြီးကြွက်သားကြာသိရလေသည်။ အောက်ကငယ်စဉ်ကလေးဘဝဓာတ်ပုံများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအတိုင်းဤသည်သူ၏မဆုတ်မနစ်ပြုံးအလေ့အထတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
အစောပိုင်းအပေါ်ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်, ရာအူးလ် Jimenez လည်း, သူ့ညီမငယ်ထားသူတစ်ဦးတစ်ဦးဂရုစိုက်တတ်တဲ့ကညီအစ်ကိုဖြစ်ခြင်း၏သဘောကိုပြသ "Miri" အဖြစ်လက်ခြေအဖြစ်အနီးကပ်နှင့်ဘယ်တော့မှသူမ၏တစ်ဦးတည်းမှောင်မိုက်၌လှည့်လည်ကြကုန်အံ့။
ရာအူးလ် Jimenez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
ဒေသခံအဖွဲ့များ၏ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများအဘို့အကစားပြီးနောက်ဘောလုံးများအတွက်ရာအူးလ်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကသူ့ကိုသူ့အခွက်တခုအဖြစ်ဖို့ဇာတ်စင်ပေးသောကလပ်အမေရိက၏လူငယ်အကယ်ဒမီတန်းစီဇယားသို့စာရင်းသွင်းကိုမြင်တော်မူ၏။ သူကအောက်တိုဘာလ 2008 အတွင်းပထမဆုံးဌာနခွဲဖြန့်ချိမတိုင်မီ 2011 အတွက်ကလပ်အမေရိက၏လူငယ်စနစ်ကတစ်ဦးလေးနက်လူငယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခရီးစတင်ခဲ့သည်။
နောက်တစ်နှစ်အတွက် 21 နှစ်အရွယ် Jimenez သူ့အဖွဲ့ရှုံးနိမ့်ရှိရာ 2012 အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲမှာမိမိတိုင်းပြည်ကိုယ်စားပြု နေမာရဲ့ ဘရာဇီးရွှေတံဆိပ်စုဆောင်းရန်။ သူ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Springboard ဖြစ်ခဲ့သည်။
ချက်ချင်းအိုလံပစ်အောင်ပွဲပြီးနောက်, လူတိုင်းအတွက်ရာအူးလ်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခဲ့တာကိုပြောပြနိုင်ဘူး။ နောက်နှစ်, ရာအူးလ် Jimenez 2013 အမေရိကန်ရဲ့နှင့်အတူသူ့ရဲ့ပထမဆုံးချန်ပီယံအနိုင်ရသွားလေ၏။
ဤသည်အောင်ပွဲအနိုင်ရရာအူးလ်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည် ပိတ်ပွဲ ပြိုင်ပွဲ, ဥရောပကင်းထောက်ကသူ့လူသားသည်တံခါးဝခေါက်စတင်ခဲ့သည့်အခါခဏ။
ရာအူးလ် Jimenez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame မှလမ်း
2014 Jimenez ၌သူ၏မက္ကဆီကန် compatriots အများအပြားယူကြပြီလမ်းကြောင်းနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ သူကနောက်ဆုံးမှာဥရောပများအတွက်ခေါင်းနှစ်လုံး။ Jimenez, အဲဒီအခြိနျတုနျးကသူအက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်များအတွက်နန်းသက်စပိန်လာလီဂါချန်ပီယံလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သူကိုယျတိုငျသညျအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအစားထိုး၏ unenviable တာဝန်ပေးထားသောခံရမွငျလြှငျ, ဒီယေဂိုကော်စတာ.
"ဒါဟာ, Diego မှ Forlan, ဒီယေဂိုကော်စတာနှင့်ဖယ်လ်ကာအို၏အကြိုက်နှင့်ကိုက်ညီဖို့ကြိုးစားနေလွယ်ကူသောမဟုတ်ဘူး" Jimenez တစ်ချိန်က Athletico Madrid အသင်းနဲ့သူ့ရဲ့အစောပိုင်းယခုအချိန်တွင်ကာလအတွင်းကဆိုသည်။
"ဒီယေဂို Forlan နှင့်ကော့စနှစ်ဦးစလုံးသူတို့ကဒီမှာလာသောအခါအကုန်ပစ္စည်းကိုအပ်သောသူအကြီးအကစားသမားတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်သမိုင်းအောင်ငါလုပ်ပေးမှဒီမှာလာဘာလုပ်ဖို့ရှိသည် - ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဂိုးသွင်းဖြစ်သည့် "။
ကံမကောင်းစွာပဲ Jimenez အထိအသက်ရှင်နေထိုင်ကြဘူး ဒီယေဂိုရှိမောင်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်များ။ ဒါကသူ့ကိုဘင်ဖီကာ join ဖို့ထွက်တင်ပို့လျက်ရှိခဲ့သည်။
ရာအူးလ် Jimenez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame မှထလော့
ရာအူးလ် Jimenez ဘင်ဖီကာမှရောင်းချခဲ့သည်။ ကလပ်နှင့်အတူသူဆက်တိုက်နှစ်ခုအနိုင်ရ လိဂ် သူကသူ့မိသားစုနှင့်အတူကျင်းပသည့်ခေါင်းစဉ်။
တဦးတည်းတကယ်တော့မက္ကဆီကန်များအတွက်နှစ်သက်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူကဘင်ဖီကာအဘို့အ 18 ပွဲမှာ 80 ဂိုးသွင်းဆိုတဲ့အချက်ကို သူတို့အား outings ၏ 60 ခုံကနေလာမယ့်အတူ။ ရာအူးလ် Jimenez သူနေဆဲ 90 မိနစ်ကစားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုမရဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုသူ့အဘို့ဘင်ဖီကာစွန့်ခွာလုပ် Nuno Espirito စန်တိုရဲ့ ဝံပုလွေစီမံကိန်းကို။
ဝီလီ Boly ၏ရောက်မှု, ရုဗင် Neves နှင့် Diogo Jota ပင်ထိုအချိန်ကဝံပုလွေတွေဟာ '' အကြီးမားဆုံးအာဏာသိမ်းမှုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်သူမက္ကဆီကန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ဝံပုလွေတွေဟာမှာရာအူးလ် Jimenez ရည်မှန်းချက်များ၏ရှေ့မှောက်၌သူ့ကိုတီထွင်ခဲ့တယ်အောင်, သူ့ကစားသမားဘ Reboot လုပ်သွားတော်မူသော 90 မိနစ်ကစားတယ်။
တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲ, လက်နက်စုံတိုက်တော်ကိုအတွင်းကသူ၏ထိရသေးသောဂိုးသွင်းအလားအလာဝံပုလွေတွေဟာအတွက် finetuned ခဲ့သည်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ကဆိုသညျကားအဖြစ်သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရာအူးလ် Jimenez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- relationship ဘဝ
တိုင်းအကြီးလူကိုနောက်ကွယ်မှာရှိအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အစဉ်အမြဲဖွင့်, ဒါမှမဟုတ်နိုင်အောင်စကားကိုတတ်၏။ နှင့်နောက်ကွယ်မှနီးပါးတိုင်းအောင်မြင်သောမက္ကဆီကန်ဘောလုံးသမား, Daniela Bassom ၏လှပသောလူတစ်ဦးတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေဖျားခါရှိပါတယ်။
"သင်၏အခြမ်းမှာ 1 တစ်နှစ်ကိုဂုဏ်ပြုသော! ငါ့အသက်ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းများအတွက်ငါနှင့်အတူတိုင်းယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါ "သင် danielabassom @ 😍😘ကိုချစ်
Jimenez ရဲ့ဒီကဗျာစွမ်းရည်, အဖြစ်အစေးပယ်သူ၏ဘဝပုံစံကိုအောက်တွင်မြင်ကြသကဲ့သို့သူတစ်ဦးပြည့်စုံရုပ်ပုံကိုတက်ဆော။
ရာအူးလ် Jimenez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
ရာအူးလ် Jimenez ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကိုသိရန်ရယူခြင်းသငျသညျအထံတော်၌ပြည့်စုံရုပ်ပုံ get ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
သူ့ကိုအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့တစ်ခုခုကြောင့် သူကအသီးကိုကြိုက်ပါဘူး။ ရာအူးလ်တစ်ချိန်ကသူအနည်းငယ်ဆိစဉ်အခါ, သူ့မိဘကသူ့ကိုငှက်ပျောအစာစားခြင်းကွိုးစား လုပ်. , သူကမကြိုက်ကြဘူးကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် မှစ. သူအသီးမဆိုအမျိုးအစားမကြိုက်ဘူး။
ကလေးတစ်ဦးအဖြစ် Jimenez သည်အခြားအစားအစာများသော်လည်းမအသီးအပွစားရန်ပိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်။ သူကအသီးအပွသူ့မကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုဆက်လက်ကြီးပြင်းလာတယ်။
အိမ်ပြန်, ရာအူးလ် Jimenez "လို့နာမည်ပြောင်ပေးထားတာအကောင့်အဆင့်အစီအစဉ် " အရာ၏အတိုပုံစံဖြစ်ပါတယ် "Alonso"သူ၏အလယ်အမည်ဖြစ်တယ်။ ဤသူကားအ "သူ၏အဖေနှင့်အခြားသောညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်လည်းအမည်ရှိကြောင့်ရာအူးလ် ".
ကွာဘောလုံးကွင်းထဲကနေ, Jimenez လင်းပိုင်နှင့်အတူကစားခြင်းအများအပြားအခါသမယအပေါ်ပြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရာအူးလ် Jimenez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- မိသားစုဘဝ
Tepeji, မက္ကဆီကို၏မြေတပြင်လုံး၌, ရာအူးလ် Jimenez ရဲ့မိသားစုကိုကောင်းစွာအရှိဆုံးထူးချွန်ဘောလုံးမိသားစုဖြစ်လူသိများသည်။ မိသားစုအတွက်, ဘောလုံးစီးပွားရေးဘဝ၌သူ၏အိပ်မက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုလိုက်ရှာတဲ့သူတဦးတည်းကိုပိုမိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်းမရှိ။
ရာအူးလ် Jimenez ရဲ့အစ်ကို Raul အန်ဒရီဘောလုံးသို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူသည်လက်ရှိတွင်သည်သူ၏အစ်ကိုဖြစ်သူကသူ့ဘောလုံးအခြေခံအုတ်မြစ်ပေးသောကလပ်အမေရိက၏အကယ်ဒမီအသင်းအတွက်ဂိုးသမားအဖြစ်ထူးကဲသောဖြစ်ပါတယ်။ 15 နှစ်ရှိပြီ၏အသက်အရွယ်မှာ Raul အန်ဒရီ, ပြီးသားကသူ၏အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုကျေးဇူးတင်မိမိအိမ်ကိုဝယ်လျက်ရှိသည်။ သူဘောလုံးကစားတောင်မှစဉ် Raul အန်ဒရီသည်သူ၏လေ့လာမှုမျက်မှောက်ရှုံးဘူး။
အများစုမှာမကြာသေးမီက, Tepeji ရပ်ရွာခေါင်းဆောင်များကစီစဉ်သည့်အားကစား Merit Award ဆု 2018 အဆိုပါ Jimenez မိသားစုအကြီးမားဆုံးဆု bagging ကိုမြင်တော်မူ၏။
Raul Alonso Jimenez Rodriguez, တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲ Tepeji ကနေစူပါစတားပါပဲ။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာအူးလ် Jimenez ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
Miguel Almiron ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဆော်လမွန် Rondon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Keylor Navas ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Hirving ဝီလိုဇာနိုကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ယောလကမ့်ဘဲလ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဟာနန်ဒက်ဇ်ကကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
အန်တိုနီယိုဗလင်စီယာကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
အန်ဒီကိုးလ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
အာတူရို Vidal ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဒါဝိဒ်သည် Luiz ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
မာစဲလိုကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Alexis Sanchez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဂျိမ်း Rodriguez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပြုပြင်ထားသောရက်စွဲ - နိုဝင်ဘာ 9၊ 2017
ဖယ်လ်ကာအိုကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်